ညနေရဲ့အမုန်းကို နှုတ်ယူသွားတဲ့လမင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ညနေရဲ့အမုန်းကို နှုတ်ယူသွားတဲ့လမင်း
Posted by သူရဿဝါ on Aug 30, 2011 in Short Story |3comments
ဘတ်စ်ကား ပေါ်က ဆင်းပြီး ကျွန်တော် နေသော လမ်းလေးထဲ လမ်းလျှောက်ပြီး ၀င်လာ ခဲ့သည်။ ညနေ (၄) နာရီ ကျော်ကျော် ဆိုတော့ နေစောင်းစ ပြုနေပြီ။ လမ်းထဲ ရောက်တော့ လမ်းလေး၏ ထုံးစံ ယဉ်ကျေးမှု အတိုင်း စကားဝိုင်းဖွဲ့ နေကြသော လူကြီး တွေရော၊ မြူးထူး ဆော့ကစား နေကြသော ကလေးတွေ ရောဖြင့် စည်ကား နေသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဖိုးအောင် လေးလည်း ကလေးအုပ် ထဲမှာ ၀င်ရောက် ရောနှောပြီး ဆော့ကစား နေသည်။
ကျွန်တော့်ကို မြင်တော့ ဖိုးအောင်က ဆော့ကစား နေရာမှရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီ ပြေးလာသည်။ ကျွန်တော် ကလည်း အလိုက်သင့်ပင် သူ့လက်ကို ဆွဲပြီး လမ်းလျှောက် လာခဲ့၏။
“ဦးဦး ဘယ်က ပြန်လာ တာလဲ”
“မဂ္ဂဇင်းတိုက်က ပြန်လာတာပေါ့ သားရဲ့”
“သားပြောပြတဲ့ ပုံပြင်အကြောင်း ရေးပြီး သွားပို့တာလား”
“ဒီနေ့လေ … လမင်းဝေဖာ လာမှာဦးရဲ့ သားက စောင့်နေတာ”
မြူးမြူးကြွကြွ ပြောလိုက်သော ဖိုးအောင် စကားကြောင့် ကျွန်တော် ရင်ထဲ မောသွားရ၏။ အို … မင်း ဒီနေ့တော့ အရိုက်ခံရဦးမှာပေါ့ ကလေးရယ်။ ဘာမှမသိသော ဖိုးအောင်လေး ကတော့ လမင်း ဝေဖာကား လာမှာကို ပျော်နေ၊ မျှော်နေ လေသည်။
အိမ်ထဲဝင်၊ ခဏနားပြီး ရေမိုးချိုးဖို့ ပြင်ဆင် နေတုန်းမှာပင် ဖိုးအောင်တို့ အိမ်က “စီ”ကနဲ အသံ ကြားလိုက် ရသည်။ ဒါက ပထမပွဲ ဖြစ်လိမ့်မည်။ လွင်မောင်နှင့် မခင်အေး ထုံးစံအတိုင်း ရန်ဖြစ်နေ ကြပြန်ပြီ။ ခါတိုင်းထက် ပိုမို ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်းသော ဆဲဆိုသံ များကို ကြားလိုက်ရ ကတည်းက အရင်နေ့ တွေထက် ပိုဆိုးသော ရန်ပွဲမှန်း ကျွန်တော် သိလိုက်သလို ဖိုးအောင်လေး အတွက်လည်း စိုးရိမ်နေမိ ပြန်သည်။ ယနေ့ လမင်း ဝေဖာကား မလာပါစေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဖိုးအောင် မုန့်ဝယ်ကျွေးဖို့ မခင်အေးကို မပူဆာပါစေနဲ့ဟု ကျွန်တော် ဆုတောင်း နေမိ၏။
ကျွန်တော် အ၀တ်အစား လဲပြီး အိမ်ရှေ့ ထွက်လာ ခဲ့သည်။ ရန်ပွဲက မပြီးသေး။ အမြဲ ဖြစ်နေကျ ကိစ္စတွေမို့ ကျွန်တော်လည်း အထူး ဂရုစိုက် မနေတော့ဘဲ ဆည်းဆာ အလှကိုသာ ခံစားနေ လိုက်တော့သည်။ ၀င်လုဆဲဆဲ နေ၏ ဖျော့တော့တော့ အရောင်က လမ်းကလေးပေါ် ညွှတ်ကျ နေပုံမှာ အလွန်ပင် ကြည့်ကောင်း၏။ ဆည်းဆာရောင် ထဲတွင် ဘယ်လောက် အထိ နစ်မြော နေမိသည် မသိ။ သံစုံတီးလုံး များဖြင့် ခန့်ခန့်ညားညား ၀င်လာသော “လမင်းဝေဖာ ရေခဲမုန့်” ကားကို မြင်မှ စိတ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြန်ရောက်သည်။
“ကလေးတွေ လာကြ .. စားကြနော် .. ခဏချင်းမှာ လမင်းဝေဖာက ကုန်တော့မှာ …. ဝေဖာ ရေခဲမုန့်တွေ .. တစ်ခုမှ ငါးဆယ်တည်း … အလှစားရင် တန်အောင်ကောင်း … အ၀စားရင်တော့ မကျန်အောင် ရောင်းပေးမယ့် လမင်းဝေဖာ တွေပါ”
ကားပေါ်မှ လူက မိုက်တစ်လုံးဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ မြူးမြူးသွက်သွက် အော်လိုက် သည်နှင့် ကလေးတွေ အကုန်လုံး ထိုကား နားမှာ စုပြုံတိုးဝှေ့ ကုန်ကြ တော့သည်။ ဖိုးအောင်လည်း ထိပ်ဆုံးမှ ပါ၏။ ခဏ နေတော့ ဖိုးအောင်က ရေခဲမုန့် ၀ယ်ကျွေးဖို့ ပူဆာရန် သူ့အိမ် ရှိရာသို့ ပြေးလာ လေသည်။ သူ အရိုက်ခံ ရတော့ မည်မှန်း ကျွန်တော် သိသည်။ မခင်အေး ခုနက ရန်ဖြစ်ထားသော အရှိန်ဖြင့် ဒေါသပြေဦးမည် မဟုတ်။ ဖိုးအောင် အရိုက်မခံရ စေရန် သူ့ကို ကျွန်တော် မုန့်ဝယ်ကျွေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
“ဖိုးအောင် ….. ဖိုးအောင်”
ကျွန်တော် ဖိုးအောင်ကို ခပ်သွက်သွက် လှမ်းခေါ် လိုက်သည်။ သို့သော် သူ့ဇောနှင့်သူ၊ ကျွန်တော် အတန်တန် ခေါ်သည်ကို မကြားဘဲ ဆက်ပြေး သွားသည်။ ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်သည့် အဆုံး သက်ပြင်း တစ်ချက်ကိုသာ ခပ်တွဲ့တွဲ့ ချမိသည်။
“ရွှမ်း …… ရွှမ်း”
“ကဲဟာ ဒီလောက်တောင် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ကောင် အမြဲတမ်း အရိုက်ခံရတာလည်း အမှတ် မရှိဘူး”
“အီး … အီး …. ကြောက်ပါပြီအမေရဲ့ ဟီး”
ဖိုးအောင်၏ ကြောက်လန့်တကြား ငိုယိုသံနှင့် မခင်အေး၏ ရိုက်နှက် အော်ဟစ်သံက ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ။ ကျွန်တော် ဖိုးအောင်လေးကို သနားမိသည်။
“ဒီလောက် စားချင်တဲ့ ဝေဖာကို ငါဝယ်ကျွေးမယ် ဟုတ်လား စားရင်စားပေါ့ မစားရင် ငါနဲ့တွေ့မယ်”
ဖိုးအောင်ကို ကြိမ်းမောင်း ဆဲဆိုရင်းမှပင် မခင်အေး အိမ်ရှေ့ လမ်းမပေါ် ရောက်လာသည်။ ပြီးတော့ “လမင်းဝေဖာ” ကားရှိရာသို့ ဒေါသတကြီး လျှောက်သွား လေသည်။ မခင်အေး ပြန်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ ဖိုးအောင် အလွန် စားချင်ရှာသော ဝေဖာရေခဲမုန့် သုံးလေးခု ပါလာလေသည်။ အိမ်ထဲသို့ မခင်အေး ၀င်သွားပြီး မကြာခင် မှာပင် အသံများ ပြန်ထွက်လာ ပြန်သည်။
“စားခိုင်းနေတာ စားလေ …. ကဲဟယ် စားစမ်း …. ရော့ စား”
ဖိုးအောင်က မစား။ ကြမ်းပေါ်မှ ဝေဖာမုန့် တွေကိုသာ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်ရင်း ရှိုက်ငင် နေ၏။ မခင်အေးက ထပ်၍ ရိုက်သော်လည်း မငိုတော့။ သူ၏ အကြည့် မှာလည်း ဝေဖာမုန့် တွေပေါ်မှ လွှဲဖယ် မသွား။ ကျွန်တော် ဖိုးအောင်၏ ထူးထူးဆန်းဆန်း ပုံစံကို ကြည့်ပြီး ကြောက်လာ မိ၏။ အခြေအနေ ပိုဆိုး မသွားခင် ကျွန်တော် ၀င်ရောက် တားဆီးရန် ပြင်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ထင်မှတ် မထားသော အဖြစ်အပျက်က ဖြစ်လာ၏။
ဝေဖာမုန့်များကို ဝေခွဲမရသော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်နေရာမှ “၀ုန်း”ကနဲ ထကာ လမ်းပေါ်သို့ ဖိုးအောင် ဆင်းပြေး သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့် ကိုလည်း ဂရုမပြု၊ မခင်အေး၏ “ဟဲ့ …. ဘယ်ကို ထသွား တာလဲ သေချင် ပြန်ပြီလား” ဟူသော အသံ ကိုလည်း သူကြားတော့ပုံ မပေါ်ပေ။ ဖိုးအောင်ကို ပြန်လိုက်ခေါ်ဖို့ ကျွန်တော် လမ်းပေါ်သို့ လိုက်လာခဲ့၏။ မခင်အေးကလည်း ကျွန်တော့် နောက်မှာ ပါလာသည်။
“လမင်းဝေဖာ” ကားနောက်သို့ ဖိုးအောင် ပြေးလိုက် သွားပုံပေါ်၏။ ဘာရည်ရွယ်ချက် မှန်းတော့ မသိ။ တရွေ့ရွေ့ ထွက်သွားသော ကားက လမ်းမဘက်သို့ ကွေ့ရန် ဟန်ပြင်နေ၏။ ပြေးလိုက် သွားသော ဖိုးအောင် ကလည်း လမ်းထိပ်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဖိုးအောင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိ၍ ကျွန်တော်လည်း ဇဝေဇ၀ါ နှင့်ပင် အပြေး လိုက်သွား မိ၏။
လမ်းမပေါ် ကွေ့သွားသော ကားနောက်သို့ ဆက်လိုက်ရန် ဖိုးအောင် လမ်းမပေါ်သို့ ပြေးတက် လိုက်၏။ ထိုစဉ်မှာပင်
တစ်လောကလုံး ငြိမ် သက် မှောင် မဲ။ ငိုရှိုက်သံ သဲ့သဲ့များ ……။ အနားမှာ ရှိသော အနိဌာရုံ အတွက် စုတ်သပ်သံများ ……။ ပြန်မပြင် နိုင်တော့သော မကောင်းဆိုးဝါး စက္ကန့် အနည်းငယ် …….။ မြေပြင်က စုပ်ယူ မသွားနိုင် သေးသော ရဲရဲစွေးစွေး အနီရောင်များ …….။ ထိုအရာများ မှအပ ကျန်သည့် အရာအားလုံး အသက်မဲ့ သွားသလို ထင်ရ၏။ မခင်အေးကတော့ သွေးအိုင်ထဲ လဲနေသော ဖိုးအောင်ကို ပွေ့ဖက်ကာ ငိုကြွေး နေ၏။ နောက်ကျ ခဲ့သော ခြေလှမ်းအနည်းငယ် အတွက် ကျွန်တော် မျက်ရည်ဝဲ နေရုံသာ တတ်နိုင် ပါသည်။
ခံစားနာကျင်သော ဝေဒနာကို အံတု၍ ဖိုးအောင်၏ မျက်လုံး လေးတွေ ပွင့်လာ သော်လည်း မျှော်လင့်ချက် မရှိနိုင် တော့သော နောက်ဆုံး အချိန်မှန်း အားလုံး သိလိုက် ကြသည်။ ဖိုးအောင်၏ မျက်လုံးလေး တွေက နာကျည်း မုန်းတီးသည့် အရိပ်အယောင် ခပ်ဖျော့ဖျော့ ထင်နေ၏။
“သား …. သား …. လမင်းဝေဖာ …. ကို …. မုန်းတယ်”
အားယူ ပြောလိုက်သော စကား အဆုံးမှာ ဖော်မပြတတ်သော ခံစားမှု တစ်မျိုးနှင့် ကျွန်တော် နာကျင် သွားရ၏။ ဖိုးအောင် ကတော့ ငြိမ်သက်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။ မင်းရဲ့ အမုန်းစိတ် ကပဲ မင်းရဲ့ အသက်ကို ယူသွား တာပါ ကလေးရယ်။ မခင်အေး၏ ယူကျုံးမရ ငိုသံက သူမ၏ မျက်ရည်စတွေ နှင့်အတူ လွင့်ကြွေ လာပြန်၏။
“သား …. သား …. အမေ နောက်ကို သေချင်လို့လားလို့ မပြောတော့ပါဘူး သားရယ် ….. သားကိုလေ … ရိုက်လည်း မရိုက်တော့ဘူးနော် ….. သိလား …. အိမ်ပြန်ကြရအောင် သားလေးရယ် …. ထ … ထ”
ဆို့နင့်နေသော မျက်ဝန်းတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကြားမှာ ဖိုးအောင် တစ်ယောက်သာ ငြိမ်းချမ်း နေမည် ထင်၏။ ကျွန်တော့် ကြေကွဲမှုနှင့် မခင်အေး၏ ဆို့ဆို့နင့်နင့် အသံတို့က တစ်ထပ်တည်း ……
“သားလေးရေ ….. ထတော့လေ အိမ်ပြန် ကြရအောင် နေ၀င်နေပြီ သားရဲ့”
နေ၀င်စ ပြုနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ နေမင်း ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မငဲ့ကွက်ပဲ တစ်နေကုန် ပေးထားသော အပူငွေ့နှင့် အလင်းကို ရုပ်သိမ်း နေ၏။ ခဏနေ အမှောင် ထုတွေ အလုံးအရင်း ၀င်ရောက် လာတော့မည်။ နောက်ဆုံး ကျန်သော ဖျော့မှုန်မှုန် ဆည်းဆာရောင် အောက်တွင်တော့ ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေနှင့် ထွက်ခွာ သွားသူတို့ နှုတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် နေဆဲ …….။ နေ၀င်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂၀၀၈ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့ဖူးသော ဝတ္ထုတိုအဟောင်းလေး …)
ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက် ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
သရော်စာတွေ ပိုကြိုက်တယ်…အဲ့ ဒိ့လိုင်းပိုလိုက်တယ်….
ဟုတ်တယ်နော် မမရွှေအိမ်စည်ပြောတာလေ ကိုသူရဿဝါရေ။အရမ်းမိုက်ပါတယ်။
ဝေဖာဝယ်ကျွေးမယ့်လူကလဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနှေးလွန်းတယ်ဗျာ။ ရေးထားတာတော့ ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။